२०१९ को सबैभन्दा हिट फिल्म बन्ला शाहिद कपूरको ‘कबीर सिंह’ ? « Khabarhub
२०१९ को सबैभन्दा हिट फिल्म बन्ला शाहिद कपूरको ‘कबीर सिंह’ ?
२४ असार २०७६, मंगलबार
मुम्बई – शाहिद कपूर अभिनित फिल्म ‘कबीर सिंह’ ले बक्स अफिसमा कमालको व्यापार गरिरहेको छ । यो फिल्म अब ‘सिम्बा’ को टोटल कमाइभन्दा पनि अगाडि लागेको छ । साथै फिल्म सन् २०१९ मा सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्मको रेकर्ड कायम गर्ने तरखरमा छ ।
फिल्मले आजसम्म बक्स अफिसमा २ सय ३९ करोड ९७ लाख कमाइ गरिसकेको छ । र फिल्मको व्यापार निरन्तर रुपमा बढिरहेको छ ।
कबीर सिंहले पहिलो सप्ताहमा १ सय ३४ करोड कमाएको थियो । यस्तै दोस्रो सप्ताहमा ७८ करोड बढी कमाइ गरेको थियो । यो फिल्म शाहिद कपूरको करिअरको सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्म बनेको छ । फिल्मले कमाइका हिसाबले ‘उरी’ लाई पनि पछाडि पारेको छ ।
बलिउड फिल्मका पण्डितहरुले यो फिल्मलाई सन् २०१९ मा सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्म बन्ने बताएका छन् । फिल्मको टोटल कमाइ गर्ला, त्यो त अब केही समयपछि थाहा हुनेछ ।
प्रकाशित मिति : २४ असार २०७६, मंगलबार २ : ५५ बजे